Maamulada Puntland iyo Somaliland oo Xiisad ka soo cusboonaatey. – Kismaayo24 News Agency
Maamulada Puntland iyo Somaliland oo Xiisad ka soo cusboonaatey.
by admin 17th July 2019 041
Waar joojiya dhul boobka aad ka waddaan Bixin iyo Qol. Saddex cisho gudahood waa in halkaa lagaga waantoobaa, nabadgal-yadiina iyo naftiina ilaashada oo noo daaya Annaga” ayuu yiri mid kamid ah Saraakiishan maanta la hadlay warbaahinta.
Wuxuuna intaas kusii daray Sarkaalku “Haddaydaan joojin, tallaabada aanu ka qaadno waxaad arki doontaan Garoowe oo Bisaduhu ku dhex meeraan.
Dhageyso:Ciidamada Amaanka Maamulka Jubbaland oo Xabsiga utaxaabay.
Xukuumada Soomaaliya oo Safiir cusub u magacawday dalka Maraykanka.
AKHRISO:- Madaxweyne Farmaajo oo Digniin Culus u diray Shirkadaha iyo Dawladah Shisheeye
Ahmed sudani 10th March 2018
Daawo: Madaxweynaha Jubbaland oo Maanta loo soo Bandhigay Cutubyo ka tirsan Ciidamada Jubbaland oo…..